Imibono yokubaleka kwe-Halloween | Izindaba Zokuhamba
Imibono yokubaleka kwe-Halloween
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, General
Lo nyaka njengabanye abaningi kuzofanele sicabange ukuthi singenza kanjani i- ukubaleka okusabekayo nge-Halloween, futhi-ke kunemibono eminingi engaba khona, noma ngabe senza impelasonto ende enhle noma uma silinda impelasonto elandelayo, noma kunjalo kubalulekile ukuhlela ukubaleka manje, ngoba siyazi ukuthi njengoba usuku lusondela amanani azokhuphuka.
Kunemibono eminingi ehlukene yokwenza ubumnandi i-halloween yokuphunyuka, futhi singajabulela amaphathi nezindawo lapho kubanjelwa khona imicimbi eyahlukene. Singazenzela nokuziphepha okukhethekile ngalezi zinsuku ukuze sizokhumbula isikhathi eside.
1 Ukuphunyuka emaphandleni
2 Ukubaleka kwe-Adventure
3 Vakashela enqabeni kaDracula
4 Bheka ama-meigas eGalicia
5 Isivumelwano eZugarramurdi
6 I-Halloween enezingane
Ukuya ekubalekeni kwasemakhaya kungumbono omuhle unyaka wonke. Kusisiza ukuthi siphumule, ukuxhumana nemvelo futhi sikujabulele ukuthula nokuzola. Ngaphezu kwalokho, kulezi ziphephelo ungaqasha izindlu zonke ukuze uhambe neqembu labangane, okuvame ukuba uhlelo oluhle kakhulu. Endabeni ye-Halloween, singasebenzisa ngokunenzuzo qasha indlu, ukuze kwenziwe iphathi esabekayo ngezimo. Kulokhu kuphunyuka singajabulela indawo ecezile lapho indlu yasemakhaya icabanga ukulungiselela izimanga ezimbalwa zezivakashi zethu, ukuze kube wukubaleka okungenakulibaleka.
Uma, ngakolunye uhlangothi, okuthandayo kuyi-adventure, ungahlala ukhetha lokhu ukubaleka ukwenza enye yalezo zinto ezikusabisayo kepha ngasikhathi sinye zikuhehe. Hamba i-paragliding, hamba u-rafting noma omunye umsebenzi we-adventure owandisa ama-pulsation wethu futhi uveza uhlangothi lwethu olunamandla. Singathatha futhi nethuba ukukhempa ngaphandle futhi ngaleyo ndlela sibe nesimo esihle sokuxoxa izindaba ezethusayo. Into enhle ngalolu hlelo ukuthi ilula kakhulu futhi singayenza ngaphandle kokuhlela noma yini. Kuzofanele sibambe iphakethe lokuzijabulisa noma sithathe itende lethu siphume siye endaweni esiyithandayo maphakathi nemvelo.
Vakashela enqabeni kaDracula
Uma unesikhathi futhi ufuna ukuhlela uhambo olukhethekile nolubabazekayo, kungani ungavakasheli isigodlo sikaDracula. Empeleni yaziwa njenge I-Bran Castle, isithabathaba sendlu yangesikhathi esinqayizivele nesigcinwe kahle, esiseRomania, edolobheni laseBran. Kuyisigodlo esinamakamelo angaphezu kwama-60, axhunywe ngamaphaseji kanti amanye afakwa ngisho nangaphansi komhlaba. Uma sibona ukwakheka kwayo ngaphandle, kubukeka njengeqoqo lemibhoshongo namakamelo avela maphakathi nemvelo. Namuhla kuyisigodlo esiguqulwe saba umnyuziyamu futhi sihlala sivulekele izivakashi. Kuthiwa uBram Stoker waphefumulelwa nguye ukuthi enze inoveli kaDracula, yize lokhu kwakungeyona indawo yokuhlala uVlad the Impaler, lapho kuvela khona ukuthi umlingiswa kaDracula uphefumulelwe.
Bheka ama-meigas eGalicia
Awudingi ukuya kude ukuzwa ngabathakathi, izinganekwane nezindaba ezingachazwa ngomqondo omsulwa, ngakho-ke uma ungafuni ukuhambisa okuningi kunezindawo ezithile ezithakazelisayo ePeninsula. EGalicia kunesiko elikhulu kuma-meigas, ngoba njengoba besho lapho, 'Haberlas, hailas'. Namuhla, kugujwa uSuku Lwabo Bonke Osanta, kepha kukhona futhi amaSamain athola amandla, isiko lamaCelt lapho iqembu le-Halloween lalikhuthazwa khona, ngakho-ke singasebenzisa ikhono lethu lapho senza ubuso ethangeni.
Siyaqhubeka nokukhuluma ngabathakathi, futhi ayikho indaba eyaziwa kangcono ngabathakathi kunaleyo evela edolobheni laseZugarramurdi. Lokhu kungaba ukuvakasha okuhle ekubalekeni kwakho kwe-Halloween, ukuvakashela i- umhume wendawo lapho okwakubanjelwe khona abathakathi nabathakathi. Leli cala langena emlandweni ngokuba ngelinye lamacala abaluleke kakhulu eNkantolo Yamacala Ezihlubuki yaseLogroño, lapho kwenziwa khona izinhlawulo ezinqala kwabanye abasolwa ngokuthakatha. Ukuvakasha nakanjani akukude kakhulu, kepha futhi singabona iMnyuziyamu Yabathakathi eyakhiwe maqondana nale ngqikimba futhi nedolobhana elincane namuhla lithandwa kakhulu ngenxa yaleli cala.
Uma uhlelo lwakho lunezingane, ungasebenzisa ngokunenzuzo ukujabulela okunikezwayo okukhethekile nemisebenzi esezindaweni ezifana amapaki wokuzijabulisa. Bahlala benamanani akhethekile emindeni kanye nemisebenzi eminingi nemibukiso engajabulisa izingane. Ngalezi zinsuku, emapaki afana nePort Aventura kunezinhlobo ezikhethekile ze-Halloween ukuze wonke umndeni ube nesikhathi esihle. Kwabancane lokhu kungaba yimpumelelo enkulu uma kukhulunywa ngokujabulela iphathi yomndeni emnandi kangaka. Ngakho-ke ungachithi isikhathi ubhukhe amahhotela namathikithi kusengaphambili ukugwema ukunyuka kwentengo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Imibono yokubaleka kwe-Halloween
Okungizisola kakhulu ukuthi umbono wama covens nabathakathi uyaqhubeka nokukhuthazwa eZugarramurdi. Okwenzeke lapho kwaba ukubulawa nokuhlukunyezwa kwabesifazane abampofu, kepha siyaqhubeka nokukuhleka. Yini emnandi, uvakashela indawo yokuhlushwa. Futhi ngasendleleni, uthatha umthakathi omncane esitolo sezikhumbuzo ngemuva kokuvakashela umnyuziyamu. Yebo ukuvakasha okwesabekayo, ezingeni lekamu lokuhlushwa, kepha akusikho ukukubeka ohlwini lwezinto okufanele zenziwe ngeHalloween. Laba besifazane bafanelwe ukuphathwa ngendlela ehloniphekile hhayi ukuqhubeka kwesithombe somthakathi, umshanelo nekhala le-aquiline ngensumpa. Abesifazane abangenacala babulawa lapho, hhayi abathakathi ababehlela ama-covens. Lokho ngeke kulimaze ukuyibhala nayo.
Ukuhamba ngeHlathi Enchanted yaseMadrid phakathi kwamadragoni namakhosazana
Vakashela uFlorence ngo-Okthoba